चमकाने कम्पाउन्ड्स निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता - चीन चमकाने कम्पाउन्ड फ्याक्ट्री
स्यान्डि Disc डिस्क प्वालहरू गोल्ड स्यान्डि paper कागज पालिसि forको लागि ...
थोक हरियो फिल्म घर्षण उपकरण डिस्क Sandpaper -L911
डिस्पोजेबल पेन्टिंग गन कप
भिजेको र सुख्खा घर्षण पॉलिशिंग स्यान्डपेपर स्यान्डि She पानाहरू
वर्ग स्यान्डपेपर कागजात रैंडम अर्बिटल Sander-A720T का लागि
सर्वश्रेष्ठ बेच्ने मल्टीफंक्शन फास्ट वैक्स कार चमकाने-XYS-A2
XYS-A2 रबिंग कम्पाउन्ड
XYS-A2 द्रुत मोम मोर्स मोर र मिरर मोम केन्द्रित एक उत्पादन हो। यो P1500-P2000 स्यान्डपेपर स्यान्डपेपर पछि बाँकी स्यान्डपेपर चिह्नहरू चाँडो र प्रभावकारी रूपमा मेटाउन र मिरर प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छ। उच्च एकाग्रता, उच्च-काट्ने इमल्शन-जस्तो फर्म्युलेसनहरू "एक-चरण पालिशिंग," उच्च दक्षता, उच्च गति, र उच्च चमक हो।
CHEAP भारी कटौती पॉलिशिंग कम्प्यूटर कार फ्यास्ट PolISH-XYS-CY0815 को लागी
यो उत्पादन एक पेशेवर पेन्ट घर्षण एजेन्ट हो जुन १ishing००-२००० आरपीएमको घुमाउने गतिको साथ एक पॉलिशिंग मेशिनमा प्रयोग गरिन्छ। यसले प्रभावी रूपमा P1000-P1200 स्यान्डपेपर र अन्य गम्भीर स्क्र्याचहरू र गम्भीर अक्साइड तहहरूको बालुवाका निशानहरू हटाउन सक्छ। यदि XYS CY-0187 राम्रो चमकाने मोम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, प्रभाव राम्रो छ!
कार केयर पॉलिश कम्पाउन्ड नि: शुल्क नमूने-XYS-CY0816
यो उत्पादन एक पेशेवर पेन्ट घर्षण एजेन्ट हो जुन १ishing००-२००० आरपीएमको घुमाउने गतिको साथ एक पॉलिशिंग मेशिनमा प्रयोग गरिन्छ। यो प्रभावी ढंगले P1200 र राम्रो स्यान्डपेपर को बालुवा निशान हटाउन सक्नुहुन्छ। यदि XYS CY-0818 मिरर उपचार एजेन्ट प्रयोग गर्दै, प्रभाव राम्रो छ!
बफिंग व्हील्स-XYS-CY0817 का लागि धातु चमकाने कम्पाउन्ड
यो एक प्रोफेशनल मोटर वाहन पेन्ट पालिशर हो जुन १०-२-२००० आरपीएमको गतिमा पलिishingग मेशिनमा प्रयोग गरिन्छ। यसले प्रभावी रूपमा P1500 र राम्रो स्यान्डपेपरको बालुवाका निशानहरू हटाउनका साथै अन्य राम्रो स्क्र्याचहरू, त्रुटिहरू, र अक्साइड तहहरू हटाउन सक्छ।
XYS प्रोफेशनल मेकानिकल चमकाने एजेंट-CY0818
यो उत्पादन एक पेशेवर मोटर वाहन मिरर फिनिशिंग एजेन्ट हो जुन १२ishing२-२००० आरपीएमको घुमाउने गतिको साथ एक पॉलिशिंग मेशिनमा प्रयोग गरिन्छ। चाँडै र प्रभावकारी कार पेंट पॉलिशिंग रिंग मार्क्स को सबै प्रकार को हटाउन सक्नुहुन्छ, उत्कृष्ट उच्च-चमक मिरर प्रभाव प्राप्त गर्न!